Farmaajo ma tabtii Xasan Sheekh uu sameeyay sanadkii 2017 miyuu sameyn doonaa ? – AfmoNews
Farmaajo ma tabtii Xasan Sheekh uu sameeyay sanadkii 2017 miyuu sameyn doonaa ?
Iyadoo muran uu ka taagan yahay dhismaha Guddiyada doorashada ee dhowaan ay magacawday Xukuumadda, isla markaana ay ka soo horjeesteen Musharaxiinta Madaxweynaha, bulshada rayidka iyo siyaasiyiin ayaa waxaa su’aal ka taagan in guddigaas sidiisa u shaqeynayo iyo in kale, iyadoo ay muuqato in dowladdu ku adkeysaneyso guddiyadaas oo sidii loo magacaabay ay yihiin.
Haddaba waxaa halkan ku falanqeyneynaa warbixin kooban oo ku saabsan muran ka dhashay doorashadii 2017, oo sidan oo kale Musharaxiintii is bedel doonka aheyd ay ka soo horjeesteen in doorashada ka dhacdo School Polizio oo ay tuhmayeen in Taliyihii booliska ee xilligaas inuu ku milmay ololihii dib u doorashada Xasan Sheekh.
Taliyihii Booliska ee xilligaas Jen. Maxamed Sheekh ayaa meel fagaare ah ka sheegay in cododka Saraakiisha Booliska ee ku jira Baarlamaanka uu heysto Madaxweyne Xasan Sheekh, waxay taasi keentay in Musharaxiinta ay duraan dhex dhexaadnimada Taliyaha, waxaana cadaadis ay saareen Xasan Sheekh iyo digniino la gaarsiiyay Beesha Caalamka ay keentay in Xasan Sheekh ogolaado in doorashada laga wareejiyo School Polizio, laguna qabto doorashada xerada Afisyooni oo laga sameeyay hangar weyn oo ay ka dhacday doorashada uu ku guuleystay Madaxweyne Farmaajo
Sidaas la mid ah Musharaxiinta Madaxweynaha ee xilligan waxay ka soo horjeedaan Guddiga doorashada heer Federaal iyo xalinta khilaafaadka oo ay xubno ka yihiin xubno ka tirsan Xafiiska Madaxweynaha, kan Ra’iisul Wasaaraha iyo Taliska Nabadsugida, waxaana ay shaki geliyeen dhex dhexaadnimada Guddigaas, iyagoo ka digay qalqal siyaasadeed iyo mid amni oo ku yimaada doorashada soo socota.
Haddaba Madaxweyne Farmaajo ma qaadi doonaa tallaab la mid ah tii Xasan Sheekh uu ku maareeyay xaaladii taagneyd doorashadii 2017 mise dhegaha ayuu ka furreysan doonaa?
Garoonka Diyaaradaha Garowe oo xiran maalintii afaraad
Sarkaal ka tirsan CIA-da oo lagu dilay Soomaaliya
Suspected Swiss stabbers “linked to jihadist investigation”